Oduu Ammee: Bilxiginnaan kan foolattuf tan ishi dhaf ajajjamu dide Oromoo hidhaaf ajjeechadhaan lafa irra dhabamssiisa jirti! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Ammee: Bilxiginnaan kan foolattuf tan ishi dhaf ajajjamu dide Oromoo hidhaaf ajjeechadhaan lafa irra dhabamssiisa jirti!
Oduu Ammee: Bilxiginnaan kan foolattuf tan ishi dhaf ajajjamu dide Oromoo hidhaaf ajjeechadhaan lafa irra dhabamssiisa jirti!
Baqqalaa Bidiraa miseensa Adda Bilisummaa Oromooti. Yeroo darbe Jaal Abdii Raggaasaa gaafachuu deemee hidhame. Akkuma baheen mana isaa keessatti namoota saddeetiin ajjeefame. Har’a reeffi isaa gara maatiitti ergame.
Baqqalaa Bidiraa dargaggeessa gameessa kichuutti nu jalaa kutan.
Itti aanaa Abbaa Alangaa waliigalaa Oromiyaa Obbo #Ashmaawii_Seefuu Obbo Dinquu Dayyaas irratti himannaa kijibaa hin banu jechuu isaatin Prez. Shimallis Abdiisaan aangoo irraa akka kaase dhagaheera. Himannaan Obbo Dinquu irratti akka banamu gaafatame “hayyama daldalaa malee hojjachuu, gibira waggaa kudhanii osoo hin kafaliin dhoksuu fi seeraan ala qotee bulaa buqqisuu fi lafa qabachuu” kan jedhuu dha. Abbaan Alangaa waliigalaa Obbo Daani’eel Assafaa jedhama. Itti aantoonni isaa Obbo Ashmawii Seefuu fi Obbo Nageessoo duubeeti. Obbo Ashmawiin hogganaa kutaa qorannaa yakkaa ture.
Itoophiyaan Dinquu Dayyaasaa fa’aaf biyya ta’uu hin dandeenye tun, Abbaacabsaa fa’aaf biyya ta’uu ni dandeettii laata? Natti hin fakkaatu
#Oromo #Oromia #Ethiopia
Gamtaan (ABOfi KFO) Marii takkalle
B/J #kamaal waliin gochuu hin qaban. Nama kanaan walii galuuf yeroo dheertuu isinirraa fixa.
1- Iccitii qabachuu hin beeku ykn beekaafi baasee dubbata.
2-Yaada dhaabilee fi Sabas gargar dhiibu, mufachiisu dubbata.
3-Jibba Hamaa qaba keesuma ABO irra
4- Hinaaffas qaba, Haayyota fi haggantootafis qooda hin kaayu.
5- Ijjennoon isaa hin beekkamu yaanni isaatis wal dhawa
6- Hoggantotaafis Kabaja hin qabu akkuma arketti nama xiqqeessa.
7- Nama qeequu Jaallata keessafuu hoggantoota fi dhaabilee isa waliin hojjatan.
~~~~~kan hafe itti guutaa~~
No one has called for the disintegration of the federal republic yet! This is just another read meat intended to serve the fake 'Ethiopianists' that are too happy to label everyone else calling for the empowerment of the nations and nationalities as traitors & ፂንፈዬችs https://t.co/Ju9sKH2k3x
— Mohamed Olad 🐪 (@oladmohamed) June 6, 2020
Wow!! Jaal Dawud Ibsa: A Leader with Moral Authority!